Umhla My Pet » 6 Tips Ngexesha ngokutshata SMART!
ukubuyekezwa: Dec. 03 2020 | 3 min ukufunda
Kukho inyaniso elikhulu ibinzana, "Uthando aluboni."
Oku akhawunti kwakhona kutheni malunga 50% kwemitshato kwi U.S. ngokuqhawuka.
Nangona ngokungazi kunokukunika yoyolo kwiindawo ezininzi, ukuthatha kwi neqabane ubomi namnye kubo. Yintoni na andazi kukhokelela ukuba umdlalo imihla, istres, nempilo enkenenkene, ulindelo, ukungonwabi, yaye ekugqibeleni ... wayeka.
Kodwa kukho iindaba ezilungileyo.
Awunayo ukudlala ubudlelwane roulette ikamva lakho. Yinto enokwenzeka ukubhala nesiphelo kukuvuyela ibali lakho uthando, xa ucinga phambili phambi kokuba atshate.
Eli nqaku yenzelwe ukulungiselela le njongo.
Uninzi lwezi ngqwalasela kunye nezindululo zisekelwe phezu ole 'ingqondo eyiyo, amava kunye ingqiqo. Abanye ngoncedo hit we nyaniso, Bridezilla.
Nazi izinto ezimbalwa kufuneka akwazi ukwandisa Uthando lwakho I.Q.
6 Imigaqo Eyiyo ukuya Ukutshata SMART:
1. Kuqonda ukuba umtshato akayi ukulungisa nantoni yaphulwe.
Ilungile lo nto. Endiyithiyileyo ukuba abe "Debbie Downer" apha; kodwa yinyani. kwimiba yolawulo umsindo, ukungafezeki, ukungcakaza, kukuzingca, nobukhoboka zokuthenga akayi sinyangeke nje kuba ubudlelwane aphakeme kwisimo yomtshato. ngelishwa, ukuthatha kwi iqabane ifana ukuthenga i "njengoko kunjalo" lokuthenga. Nokuba imeko, ukuba yeyakho ngoku. Khetha ngenyameko ukuthintela ukuzisola umthengi lowo.
2. Nangona izichasi umtsalane, Izibini commonalities engundoqo badla ukuba athathe ixesha elide.
Akukho mntu ufanele atshate ikopi efana nqwa ye ngokwabo. Bekuya kuba yindinisa, kwaye anika oluncinane ngendlela ukukhula uchulumanco. Sekunjalo, kukho izinto ezithile ukuba ababini kuni kufuneka efanayo. Oku kuquka iinjongo zakho, indlela yakho ixabiso, kwaye ubuncinane omnye okanye emibini umdla okanye ukuzonwabisa. Nazi ezinye iindawo ezongeziweyo ukuqwalasela: Bangaphi abantwana ukwenza ababini ufuna? umtshato Big okanye ezincinane? Indlu okanye iflethi? Fumana ingcamango apha?
3. Ukuba ukukhangela email yabo, ukuqhekezelwa akhawunti zabo eendaba zentlalo, okanye iiscreen iminxeba yabo yefowuni, "Houston kukho ingxaki."
Impumelelo yalo naliphi ixesha elide, tshata yakhiwe phezu trust. Kwaye nokuba unayo okanye awunayo. Nangona abanye abantu kubambana ukuba akukho nto ukuzimela, kufuneka bakwazi ukuba abangaphezu ezinokufumaneka uBlanche ukuba akhawunti iqabane babo. akukho mfuneko–wonke umntu ufanelwe bafikelwa wabucala. Kwakhona, ukukholosa kufuneka! Oku kunjalo, kokuba iqabane yakho imbali inkohliso. Yiloo elinye inqaku ngelinye ixesha.
4. "Jonga nzulu ngaphambi uyatsiba,"UMgwebi Mablean wayedla ngokuthi usoloko yakhe ethandwayo TV enkundleni bonisa. Kwaye isifundo ethobela ezixabisa.
Phambi kokuba "ukutsiba umtshayelo" uthabathe ixesha ukwazi omnye umntu. Amava maxesha ezimbalwa kunye. Jonga indlela / uziphethe ngamaxesha embandezelo, ngamaxesha okulungileyo nokubi, ngexesha ukugula nempilo, kuba iziphumo ezigqwesileyo.
5. Gcina izinto ngendlela eyiyo.
veki nganye kwi Bridezilla, ababukeli lingqina abantu smart ukwenza ezinye izigqibo kunokuba bhanxeka. Musa namnye kubo. Nantsi umzekelo. Nomtshakazi uya kuchitha $60,000 kwi kumtshato, nangona ibamba umsebenzi apho sanukuyenza $24,000 ngonyaka. isibini, nje ngeziphumo, Siqala umanyano lwabo umthwalo onzima ngokukhwel kwetyala emqolo. Okanye abaphila babo kamasipala kwiminyaka embalwa yokuqala. mdla. Ngaba uyazi ukuba enye oonobangela woqhawulo mtshato na imali? Khumbula ukuba usuku nje olunye Umsitho okunene, xa umtshato yenzelwe ukuba ngonaphakade. Nkqu nangona Kungokwemvelo njengomtshakazi ukuba ufuna ukuziva ngathi "Nkosazana" ngomhla yakhe ekhethekileyo, kufuneka achithe like "ebukumkanini."
6. Factor kweenkonzo i'quadratic uthando.
Ukuba isiseko lokomoya kunokusinceda ukuba neenqwithela zobomi, ubanike amandla nokhokelo ngamaxesha anzima.
Landela ezi ezibalaseleyo imithetho ezintandathu umtshato iminyaka emininzi yoyolo yomtshato.